SingForYou.net - Sandi
Tags : 103-Sandi-KoBurma
By : KoBurma on Jul 31, 2009
Score: 100 Rating: 5.00 Comments: 39
sandi yayyyyyy uu burma khaw nay tal byooooo...:P good u gyi******
__$$$$$$$$$_____________________,,$$$$$$$____________ ___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$_____________ ____$$$$$$$$$$$$__ ._____.___$$$$$$$$$$$______________ ____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$_______________ ____$$$$$$$$$$$$$$,, '._,'_$$$$$$$$$$$$$________________ ____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:,$$$ $$$$$$$$$$$_______________ ______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****______________ __________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,_____________________ ____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,_________________ ____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$_____________ ___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$..____________ _$*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*___*$,_________ *____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,___'*_________ ______,,$*$,$$**'___________'***$$***,,________________ ____,,**__ '_.*__________________*____________________
romeo on Aug 3, 2009 0
kaung del byar.....
**************************** ************************ ****************************_************************ ***************************___*********************** **************************_____********************** *************************_______********************* ************************_________******************** **************_____________OH!____________*********** ****************_______*Really____*_____************* ******************* _________________ *************** ********************_________________**************** *******************_________*_________*************** ******************_______*******_______************** *****************_____*************_____************* ****************___*******************___*** ******** ****************_************ **********_************
maureen on Aug 1, 2009 0
ဘိုးဘိုးနော် sandi လုပ်မနေနဲ့ ဖွားဖွားသိရင် ဘိုးဘိုးကိုရိုက်လိမ့်မယ်...:P...ဟီးဟီး စတာနော်... အရမ်းအရမ်းကိုကောင်းတယ် ဘိုးဘိုးဦးဦးဗားမား......:)**************************for u...
Linn on Jul 31, 2009 0
KoBurma on Aug 1, 2009 0
စကာလုံး နဲနဲလေးနဲ့အနှစ်ချုပ်လေး မြှောက်ပြောသွားတာ လွှတ်ကောင်းဗျာ … လွှတ် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ကိုလင်း:):D:P
SCH7677009 on Jul 31, 2009 0
Thanks alot bar "good par tae my dear bro kyi yar" :):D:P
forevermoe on Jul 31, 2009 0
UU Burma yay...kg tal byo...သမီးလေးမိုး lar arr pay twer pr tal..***************** for UU Burmaatwet..:)
forevermoe လေးက forever အားပေးလို့… forever ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် Sis လေး forevermoe...
Ilovemusic on Jul 31, 2009 0
kaung bar tal...bro.... arr pay nay kyaung bar.....***** for u....
KoBurma on Jul 31, 2009 0
Thanks alot par Bro Ilovemusic....:):D:P
myobala on Jul 31, 2009 0
ဇာတ်မင်းသားကြီးကလည်း ဇာတ်သံနဲ့ ပြောတော့ …ဇာတ်သံနဲ့ ပြန်ပြောရတာပေါ့ … ကျေးဇူးအထူး တင်ကြောင်းပါ်…ဇာတ်မင်းသားကြီး မျိုးဗလာ…
philtre on Jul 31, 2009 0
တွံတေးစိုးအောင်လေသံနဲ့ စန္ဒီဆိုထားတာ.. မြ၀တီမင်းကြီးဦးစ ရက်ပ် ဆိုသလိုပဲ တကဲ့ကိုကောင်းတယ်.. တွံတေးမြို့စားရေ... ကြယ်ငါးလုံးကို ဘယ်နားသုံးသုံး ပေးလိုက်ပါတယ်... :P ^_^ :D
ဟွန့် သူကဇာတ်မင်းသားဆိုတော့ ဇာတ်သီချင်းဆိုတတ်တာပေါ့ …… ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ်… ဇာတ်မင်းသားလေး လွမ်းသွပ်…
brownlay on Jul 31, 2009 0
Sandi tae. Lar? Nice nice *****!
ဟုတ်ပါ့စန္ဒီ မှ စန္ဒီ …:):D:P ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ်… Sis Brownlay
Maung_Than on Jul 31, 2009 0
ko burma yay sandi sandi nae bar phit nay dar lal hinnnn? very nice song par bro.5*
ခြေသွက်တဲ့Beckham ကို ပြောမပြဘူး… :):D:P ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ကိုမောင်သန်း…
mayyu on Jul 31, 2009 0
ဟဲဟဲ ကျွန်တော်လဲ အခုမှသိတယ်…သြော် ... ဒါနဲ့ဆရာလေး ဘွဲ့အမည်က ဒေါ်စန္ဒီ တော့့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော် :):D:P …… ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ် …မမယု…
shwezin888 on Jul 31, 2009 0
aww..ku dop sandi pyit twarbpool...^_*alar kar ya tha * ma u lal pay mer bal !!!
အခုမှတွေ့ တာကိုး… အရင် ထဲကတွေ့ ရင် … အရင် ထဲက Sandi ဖြစ် မှာပေါ့ …အခုလို အလကားရတဲ့စတားစ် မတွန့် မတို ပေးတဲ့အတွက် အရပ်ရှည်ရှည် ရွှေဇင်ဖြစ်ပါစေ… ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ်…ရွှေဇင်၈၈၈
zezawar on Jul 31, 2009 0
zezar kyaung ler arr pay thwer ber dae!!! hooayin ka tee ka kyaik kae thaw song ta poke ber. Ninger dwe kai de let net pone star5stars ler bi shaung naing yin shaung!!! (het het hets - koburma ye yi than)
အိုး…ဇီဇဝါ လေး က နင်ဂျာ လက်နက်ပုန်းနဲ့ပစ်တာကို…ကိုကြီးက ပန်းနဲ့ ပေါက်တယ်လို့သဘောထားပါ့ မယ်…အား…အား…စူးတယ်ဂျ…တေပါဘီ………ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ်… ဇီဇဝါ လေး :):D:P
pp01 on Jul 31, 2009 0
မြို့စားဂျီးကလဲမကြီးမငယ်နဲ Sandy..Sandy..Sandy nae, day dreamဖြစ်နေလား?just kidding..good par tel..*************
ဟွန့်မမပီပီ က သူလည်း ငယ်ရာက ထွားလာတာ ကို…အနော့်ကိုပြောနေတယ် :):D:P …… ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ်… မမပီပီ…
winwinthant on Jul 31, 2009 0
သီချင်း ဆိုဖို့လေချွေတာနေတာလား…ညီမလေးသန့် …( လေချွေတာနေတာ ခပ်ကောင်းကောင်း မဟုတ်ရင် KoBurma ဘိုးဘွားရိပ်သာ ပြေးရလိမ့် မယ်:):D:P ) ……ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ်……ညီမလေးသန့် …
moeluu on Jul 31, 2009 0
KoBurma, it's one of ur nice songs... Cheers!
Thanks alot Ko moeluu:):D:P
maintmaintt on Jul 31, 2009 0
ကလေး လေးရေ ချစ်ပါ့အဲ …ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ် … ကလေး လေး maintmaintt :):D:P
susannyunn on Jul 31, 2009 0
oxygen ko burma g... sandi tay par tay loat ma nay nelz.. lu g ka lu g lo nay par pa...hehe...ko burma ( mee laung chin koahtoo arr pay nay par the...)....:))5***** for u par shintttttttttttttttttttttttttttttttt..
ဂွိလေးနော်…သွပ်သီချင်းတွေဆို…ပထမဆုံး Comment ပေးပြီး…ဟွန့် …… :) ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ်…ဂွိလေး:)
zaw-khaing on Jul 31, 2009 0
မြန်လိုက်တာ…စူပါမင်း(န်) ကိုဇော်ခိုင်…ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ်…:)